20 Astaamood Oo Lagu Garto Qofka Jacaylka Dhabta Ah Hayo - Daryeel Magazine
20 Astaamood Oo Lagu Garto Qofka Jacaylka Dhabta Ah Hayo
1- Qofka sida dhabta ah wax u jeceli waxa uu u ilaaliyaa una sharfaa lamaanaha kale ee uu jecel yahay si ka badan sida uu u daryeelo naftiisa.
4- Mar kasta oo uu soo dhaco Tilifoonka u gaarkii waxa uu jecel yahay in uu noqdo codkii lamaanaha uu sida dhabta ah u jeclaa.
7- Hadii Lamanaaha aad jeceshahay uu la socdo rag ama dumar kale, waa inuu muuqaalkiisu/muuqaalkeedu uu si gaar ah kaaga soocnaadaa bidhaan ahaan masaafo durugsan kuwa kale.
8- Marka uu ku soo eego Lamaanaha aad jeceshahay ee indhahaagu ay qabtaan indhahiisa waad naxdaa, garaaca wadnahaaaguna si aan caadi ahayn ayuu u sii kordhaa.
9- Mar kasta waad ka fikirtaa, wax kasta oo aad aragtaa way ku xasuusiyaan jecaylkiisa/jacaylkeeda, waxaanad jeceshahay hadal haynta iyo warka Lamaanaha aad jeceshahay, iyo maqalka codkiisa/codkeeda iLbidhiqsi kasta.
10- Qofka jecaylku biyo dhigaa kuma dhiirado in uu si caadi ah ula hadlo Lamaanaha uu jecel yahay, mar kasta oo uu la hadlana waxa uu dareemaa firka nax iyo Khajilaad saa’id ah kalgacal awgii.
12- Meel kasta, xilli kasta, iyo wax kasta oo uu qabanayo Qofka wax jeceli waxa qalbigiisa ka dhex guuxa lamaanaha Isaga/Iyada uu sida runta u jecel yahay.
14- Qofka sida dhabta ah wax u jeceli waxa uu mar kasta door bidaa in uu ka maqlo lamaanaha kale ee uu jecel yahay in uu ka badheedho jacaylka oo uu ku yidhaahdo waan ku jecelahay.
15- Hadii uu ku hayo Jacayl dhab ahi aragtida indhahaaga iyo qalbigaaga waxa aad ku lamaanaysaa Lamaanaha aad sida xaqiiqda ah u jeceshahay, mar walbana waxa aad jeclaataa ilaa xad ag joogiisa, muuqiisa, codkiisa iyo sheekadiisa Isaga/Iyada.
17- Qofka wax jeceli dhamaan astaamaha midabyada bilicdasan ee quruxda iyo udgoonka u ah Kownka sida Ubaxyada waxa uu ku taxaa Qoor gashi uu u hibeeyo in uu qoorta u sudho Luqunta Lamanaaha uu Jecel yahay.
18- Waxa uu jeclaadaa in makhluuqa dunida ku nool oo dhami ay la jeclaadaan lana amaanaan Lamaanaha uu jecel yahay,
19- Wakhtigiisa qaaliga ah iyo naftiisaba waxa uu u huraa Lamaanaha uu jecel yahay hadh iyo habeenba.
20- hadii uu maqlo cid hadal haysa lamaanaha uu jecelyhay waxa uu isku dayaa in uu si buuxda u helo xogta laga tabinayo isaga oo hadii warka laga sheegayaan aanu fiicnayn dareema cidhiidhi iyo diidmo.
10 Calaamadood Oo Lagu Garto Haddii Qofka Aad Jeceshahay Aanu Wax Xiiso Ah Kuu Hayn Calaamadaha Lagu Garto Qofka Ku Neceb Cudurka Dyslexia Oo Qofka Ku Adkeeya Wax-akhriska Astaamaha Lagu Garto Hababka Loo Dabiibi Karo Astaamaha Lagu Garto Ninka Wanaagsan Ee Mustaqbal Doonka Ah